समाचार – Namaste Dainik
September 30, 2020 NamastedainikLeaveaComment on कसले गर्यो रुसले बनाएको साढे दुई करोड डोज कोरोनाको खोप नेपाल ल्याउने सम्झौता ?
एजेन्सी ।रुसमा बनेको कोभिड १९ विरुद्धको खोप नेपाल ल्याइने भएको छ । रुसले २ करोड ५० लाख डोज खोप नेपाललाई दिने भएको हो ।यससम्बन्धी रुसको स्पुतनिक–भी भ्याक्सिन निर्माता कम्पनी रसियन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र औषधि निर्माता कम्पनी ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सबीच नेपालमा खोप आपूर्ति गर्नो सम्झौता भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रोयटर्सले जनाएको छ । फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत […]
फेरी १८ दिन लकडाउनको तयारी ।
September 29, 2020 NamastedainikLeaveaComment on फेरी १८ दिन लकडाउनको तयारी ।
काठमाडौ । सरकारले १८ दिन लकडाउन गर्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ हजार सक्रिय संक्रमित पुगेको अवस्थामा लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको छ । सोही अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको मोडालिटी तयार गरेको हो । समितिको बैठकले बढिमा १८ दिन लकडाउन गर्नेगरी मोडालिटी तयार पारेको हो । मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यदलले […]
September 27, 2020 NamastedainikLeaveaComment on अमेरिकामा मस्तिष्कलाई खाने सूक्ष्मजीव भेटियो, धाराको पानी प्रयोग नगर्न चेतावनी
अमेरिकाको टेक्सस राज्यस्थित लेक ज्याक्सन भन्ने स्थानमा धाराको पानी प्रयोग नगर्न चेतावनी दिइएको छ । सहरको सार्वजनिक पानी आपूर्तिमा मस्तिष्क खाने घातक सूक्ष्मजीव भेटिएपछि अधिकारीहरले धाराको पानी प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। पानी परीक्षण गर्दा नेगलेरिया फोलेरी भन्ने अमोबा भेटिएको जसले मानिसको मस्तिष्कमा गम्भीर चोट निम्त्याउने बताइएको छ। अधिकारीहरुले पानीमा रहेका उक्त सूक्ष्मजीवलाई […]
बिछिप्त पार्ने त्यो तस्बिरः जो भारतबाट घर फर्किए, आँगन टेक्न पाएनन्
September 27, 2020 September 27, 2020 NamastedainikLeaveaComment on बिछिप्त पार्ने त्यो तस्बिरः जो भारतबाट घर फर्किए, आँगन टेक्न पाएनन्
कञ्चनपुर । पुचौंडीको हाट बशन्तपुरस्थित बजारमा पुगेपछि उनलाई भोक लाग्यो। चाउँमिन खान खोजे। पसलेले चाउमिन दिए, प्लाष्टिकमा पोको पारेर। एक बोत्तल पानी साथमै थियो। उनी बजारमा रोकिएनन्, हतारिदैं छिटछिटो पाइला सारे। क्वाप, क्वाप चाउमिन खाँदै बाटो नापिरहेका थिए। धेरै कोही संग बोलेनन्, अनुहारको रंग फुङग उडेजस्तो थियो। उनको हतास भावभंगी देखेर मात्रै स्थानीय पसलेको ध्यान […]
३ घण्टा बत्ती जाने !
September 25, 2020 NamastedainikLeaveaComment on ३ घण्टा बत्ती जाने !
काठमाडौं , शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ३ घण्टा वि’द्युत आ’पूर्ति ब’न्द हुने भएको छ । थिमि डि’ष्ट्रिबुसन अन्तर्गत बालकुमारी फि’डर मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले दिउँसो १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म विद्युत आ’पूर्ति ब’न्द हुने नेपाल विद्धुत प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त फि’डर अन्तर्गत पा’टिविहार, ब’प्पा महदेव, मध्येपुर हस्पिटल, न’यबस्ती, राम मन्दिर, ददिकोट, गाम्चा , शिरुटार, चित्रपुर, […]
सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न सहुलियत ऋण दिने !
September 23, 2020 September 23, 2020 NamastedainikLeaveaComment on सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न सहुलियत ऋण दिने !
७, असोज । बागमती प्रदेश सरकारले उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि ऋण लगानी गर्ने कार्यविधि पारित गरेको छ । कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी […]
मन्त्री भानुभक्त ढकाल आइसोलेसनमा !
September 21, 2020 NamastedainikLeaveaComment on मन्त्री भानुभक्त ढकाल आइसोलेसनमा !
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल पुनः आइसोलेसनमा बसेका छन् । मन्त्री ढकालको परिवारका एक सदस्यमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगे उनी आइसोलेसनमा बसेका हुन् । मन्त्री ढकालको परिवारका एक सदस्यमा कोरोना संक्रमण देखिएकाले आजदेखि आइसोलेसनमा बसेको प्रेस सल्लाहकार माधवप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । कोरोनाको महामारीका बीचमा सक्रिय रहेका मन्त्री ढकालका परिवारका सदस्यहरुमा भने यसअघि […]
कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्न मिल्दैन : मन्त्री ज्ञवाली
September 19, 2020 NamastedainikLeaveaComment on कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्न मिल्दैन : मन्त्री ज्ञवाली
बुटवल । नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताएका छन् । मन्त्री तथा प्रवक्ता ज्ञवालीले कानुन अनुसार घिसिङको पुनर्नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताएका हुन् । शुक्रबार बुटवलमा प्रेस संगठनद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको हित र कार्यक्षमताका अधारमा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिने उल्लेख […]
सुजुकीले ल्यायो दशैं तिहार योजना, मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदमा पाउनुहोस यस्तो अफर !
September 19, 2020 NamastedainikLeaveaComment on सुजुकीले ल्यायो दशैं तिहार योजना, मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदमा पाउनुहोस यस्तो अफर !
काठमाडौं, सुजुकी कम्पनीको मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नेपालका लागि आधिकारिक आयातकर्ता तथा बिक्रेता भी.जी. अटोमोवाइल्सले आउँदै गरेको वडा दशैं, शुभ दिपावली तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरि आफ्ना ग्राहकहरुका लागि सुजुकी दशैं तिहार अफर प्रारम्भ गरेको छ । ‘चाड पर्व सबैको, हौसला हाम्रो’ भन्ने नारा लिएको यस अफरअन्तर्गत ग्राहकहरुले सुजुकी कम्पनीका कुनैपनि मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्दा […]
खाली ग्यास सिलिण्डरको मूल्य निर्धारण गरियो !
September 18, 2020 September 18, 2020 NamastedainikLeaveaComment on खाली ग्यास सिलिण्डरको मूल्य निर्धारण गरियो !
२ असोज, काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बागमती प्रदेशमा एलपी ग्यासको खाली सिलिण्डरको धरौटी रकम २१ सय रुपैयाँ तोकेको छ । बजारमा कम्पनीअनुसार सिलिण्डरको धरौटी रकममा मनपरी मूल्य लिइएपछि एक रुपता ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए । बागमती प्रदेशमा शुक्रबारदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डरसहित […]